Ileba Ahịa - Hengtai (Hong Kong) share Co., Ltd.
Project ： American ahịa, friji usoro
Hengtai Service ： OEM-nkwekọrịta n'ichepụta (ahaziri àjà ihe ọ ultraụ -ụ ala okpomọkụ omume) 、 Mike (Managerzụ Manager) & Kurt (Director nke Engineering)
Anyị na HengTai na-arụkọ ọrụ kemgbe 2003. Anyị ahọrọ HengTai mgbe anyị gara ileta ụlọ ọrụ ole na ole na shenzhen na SiChuan, ụlọ ọrụ Heng tai gafere nyocha anyị. Ọrụ ụlọ ọrụ ha masịrị anyị nke ukwuu. Hengtai ezigarala ihe karịrị 650,000 LCD maka anyị ugbu a, Anyị enweghị nsogbu ọ bụla na LCD ha. Anyị nwere afọ ojuju karịa arụmọrụ HengTai. Anyị na-atụ anya iso HengTai rụọ ọrụ ruo ọtụtụ iri afọ
： Ihe oru Control Industrial Automation Control System
Hengtai Service ： OEM-nkwekọrịta n'ichepụta (TFT-CTP-OCA）
Heike Bauer (German Mechatronics Purchasing Manager) Ya na ndị otu ya gara ụlọ ọrụ anyị. Mgbe ha bịara uzuzu-free mmepụta omumuihe, ha hụrụ na ihe karịrị 80% nke anyị n'ichepụta Filiks na-akpaghị aka. Onye ahịa ahụ gosipụtara njikere siri ike ịkwado. Mgbe onye ahịa ahụ nyochachara ihe ndị ha chọrọ gbasara ngwaahịa ha, Anyị duziri nkwukọrịta enyi na enyi, ndị ọrụ injinia anyị mere atụmatụ 2 maka ndị ahịa ịhọrọ dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị. onye na-eme ihe n'eziokwu, onye nwere ezi obi na-ọrụ ma na-enye aka na mmepe anyị. Ọ dịghị mfe dị ka onye mba ọzọ ịmara onye nrụpụta nke ị tụkwasịrị obi, mana ị nwetara atụmanya ọ bụla. Ana m atụ aro gị nye onye ọ bụla m maara
Project ： Aka-ẹkenịmde nkenke ule ngwá
Hengtai Service ： OEM-nkwekọrịta n'ichepụta (Character LCD ihuenyo)
Bernard (Dynamic Motion SA Ijikwa Director）
Ihe ọrụ injinịa HengTai mere dị ịtụnanya, ndị otu gị haziri & wulite ihe ngosi a na-arụ ọrụ nke anyị chọrọ, Anyị nwere ike igosi ndị ahịa anyị n'oge nwere nnukwu nsonaazụ azụmaahịa. Umu mmadu juru. Aga m akwado HengTai na ndị enyi ndị ọzọ chọrọ ịhazi na ịmepụta ọrụ
： Nchịkwa ： Usoro nchịkwa ozuzu mmiri
Ọrụ Hengtai ： OEM-nkwekọrịta nkwekọrịta (Ihe ngosi LCD eserese)
Honshu Island, Japan (Onye isi ụlọ ọrụ Honshu Island Technology Company)
Anyị na Heng tai na-arụ ọrụ afọ 10 ugbua. Hengtai nwere ike ịmepụta LCD-LCM anyị nwere ogo dị elu n'oge. Anyị nwere afọ ojuju maka ogo na ọrụ Hengtai. Anyị na-aga n'ihu na-eweta ọtụtụ ọrụ ọhụrụ. Hengtai ga-abụ nhọrọ mbụ maka nkwekọrịta nkwekọrịta na imepụta ngwaahịa ọhụụ!